समाजसेवा खुसी साट्ने अवसर हो : कुल आचार्य, एनआरएन उपाध्यक्ष
6 months ago 1017
कुल आचार्य गैर आवासीय नेपाली संघ ‘एनआरएनए’को उपाध्यक्ष हुन् । गत अक्टोबर १४ देखि १७ सम्म काठमाण्डौमा भएको एनआरएनको आठौ विश्व सम्मेलनबाट उनी उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । पर्वतको जलजला गाउँपालिका धाईरिङका कुल प्रसाद आचार्य यस अगाडी यूरोप संयोजकको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । बेलायतका सफल नेपाली ब्यवसायी समेत रहेका आचार्य एनआरएन बेलायतको पूर्वअध्यक्ष समेत हुन् । ब्यवसाय संगै विभिन्न सामाजिक कार्यमा समेत सक्रिय रहेका आचार्यले जन्मगाउँमा रहेको कृष्ण भवन धर्म उच्च माध्यामिक विद्यालय, मल्लाजको विद्याज्योती माविमा कम्प्यूटर सहित विद्युतिय पुस्तकालयका साथै विभिन्न सहयोगहरु गरेका छन् । उनले गाउँमा रहेको विद्यालयमा स्वर्गिय पिताको सम्झनामा अक्षय कोषका साथै विभिन्न सामाजिक सहयोगहरु समेत गरेका छन् । उनले म्याग्दीमा मोना यूकेले सञ्चालित एम्बुलेन्स, बालबालिकालाई लक्षित गरी अक्षय कोष, गलेश्वरको वृद्धाश्रमलाई समेत ५ लाखका साथै शिक्षा, स्वास्थ्यमा समेत सहयोग गरेका छन् । एनआरएन यूकेको अध्यक्ष हुदाँ हिमाली जिल्लामा प्रसुती सेवाको भवन बनाएर लोकप्रियता कमाएका आचार्य गैरआवासीय नेपाली बिच निकै लोकप्रिय छन् ।
एनआरएनको आठौँ विश्वसम्मेलनमा सात बुँदे प्रतिबद्धता सहित उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित भएका एनआरएन उपाध्यक्ष कुल आचार्यसँग विशन क्षेत्रीले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश :
एनआरएन उपाध्यक्ष भईसकेपछि तपाईले शुरु गरेको पहिलो काम के हो ?
नेपाल हुँदा म जहिले पनि पहिला गाउँ जाने गर्छु र केही कल्याणकारी कामहरु गर्ने गर्छु । यसपटक पनि उपाध्यक्ष जीतेको भोलिपल्टै म आफ्नो जन्मथलो गएँ र दधि आचार्य अध्यक्ष रहेको संस्था पर्वत वेलफेयर सोसाईटी युकेले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पर्वत जिल्लामा रहेका दृष्टिविहीनहरुको सहयोगार्थ रु दश लाख हस्तान्तरण गर्ने मौका पाएँ । यसलाई मैले एउटा खुसी साट्ने अवसरको रुपमा पनि लिएको छु ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न कसरी प्रोत्साहित गर्नुहुन्छ ?
विदेशमा विभिन्न पेशा र व्यवसायमा संलग्न नेपालीहरुको सीप र लगानी नेपाल भित्र्याउन हामीले लामो समयदेखि प्रयास गरिरहेका छौं । वास्तवमा हामीले लगानी भन्दा आर्थिक लगानी मात्रै सम्झनु हुँदैन ।
हामीले विकसित देशमा सिकेको ज्ञान र सीप तथा आर्जेको पूँजी नेपाल र नेपालीको कल्याणमा लगाउन चाहन्छौं ।
बौद्धिक र आफुसँग भएको सीप र दक्षताको हस्तान्तरणलाई पनि लगानीको रुपमा हेर्नुपर्दछ । हाल पनि नेपालमा एउटा ठूलै लगानी भित्र्याउन संसारभरि साथीहरुसंग सरसल्लाह गरिरहेका छौं र यसबारे छिट्टै घोषणा गर्नेछौं । यसकालागि कार्ययोजना पनि तर्जुमा गर्दैछौं ।
तपाईं लामो समयदेखि एनआरएनएको नेतृत्व तहमा हुनुहुन्छ, नेपालमा एनआरएनएले गरेका काम के के हुन ?
स्थापनाकालदेखि नै गैरआवासीय नेपाली संघले नेपालमा संयुक्त लगानी, परोपकारी कामहरु र संगठनलाई मजबुत बनाउने काम गर्दै आएको छ । सन् २०१५ मा आएको विध्वंशकारी भूकम्पपछि गोर्खा जिल्लामा भूकम्प पीडितहरुकालागि नमुना आवास बनाउने काम पूर्व अध्यक्ष शेष घलेज्यूको अगुवाइमा शुरु भएको हो र हाम्रो कार्यसमितिले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।
त्यस्तै, नाकाबन्दीका बेला औषधि वितरण, बाढीपीडितहरुलाई मानवीय सहयोग र बाग्मती नदी किनारस्थित शंखमूल पार्क निर्माणजस्ता कामहरु भैरहेका छन् । यसबाहेका जलविद्युत, बैंकहरु, होटल तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि गैरआवासीय मित्रहरुले लगानी गरिरहनु भएको छ ।
भविष्यमा नेपालमा के के परियोजना गर्ने तयारी छ, एनआरएनको भिजन के हो ?
एनआरएनको भिजन भनेको समृद्ध नेपालको निर्माणमा सक्दो योगदान पु¥याउने नै हो । हामीले विकसित देशमा सिकेको ज्ञान र सीप तथा आर्जेको पूँजी नेपाल र नेपालीको कल्याणमा लगाउन चाहन्छौं । गैरआवासीय नेपाली खेम शर्मा र साथीहरुले नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सफा तुल्याएर अहिले संसारभरिका हिन्दुहरुको आस्थाकेन्द्र पशुपतिनाथ परिसरलाई सफा तुल्याउन लागीरहनु भएको छ ।
उज्यालो नेपाल, विद्यालयहरुमा पुस्तकालय बनाउने काम गैरआवासीय नेपालीहरुले उदाहरणीय काम गरिरहेका छन् । यसबाहेक एनआरएनहरुको लगानीले हजारौं रोजगारी सिर्जना गरेको छ । हामी अरु क्षेत्रमा पनि यस्तै रचनात्मक काम गर्ने प्रयासगरिरहेका छौं ।
एनआरएनको नेतृत्व तहमा रहँदा पर्वतको समृद्धिको लागि तपाईको कुनै योजना के छ ?
हालै अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजको गठन भएको छ र समाजले पर्वत जिल्लाको विकासकालागि उल्लेखनीय परियोजना बनाउने जिम्मा मलाई दिएको छ । साथीहरुसँग सल्लाह गरी मैले छिटै यसबारे घोषणा गर्ने छु । खासमा यो समाजको उद्धेश्य नै पर्वतलाई समृद्ध बनाउने हो । हामीले योजना बनाएर काम गर्नेछौँ ।
अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजले ‘एक करोडको परोपकारी कोष’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । यसमा एनआरएनको सहयोग कस्तो रहनेछ ?
एक करोडको परोपकारी कोष स्थापना गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजको प्रयास अत्यन्तै सह्राहनीय छ । म यसमा संलग्न सबै साथीहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । अब हामीले यो घोषणालाई जतिसक्दो चाँडो यथार्थ बनाउनु पर्छ ।
त्यस्तै ६ महिनाभन्दा बढी अवधि देशबाहिर बस्ने सबै नेपाली एनआरएन हुन् । त्यसैले विभिन्न तह र तप्कामा रहका पर्वतका साथीहरु विभिन्न एनआरएन एनसिसिहरुमा अध्यक्ष लगायत अन्य जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुले आआफ्नो क्षेत्रबाट पर्वत जिल्लाको समग्र विकासकालागि योगदान गरिरहनुभएको छ । त्यसैलाई नै एनआरएनको सहयोगको रुपमा पनि हेर्नुपर्ला ।
अन्तमा तपाईले भन्नुपर्ने केही कुरा ?
नेपाल बाहिर बस्ने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुले जननी तथा जन्मभूमिको ऋण तिर्न र नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन आआफ्नो ठाउँबाट सकृय रहन म हार्दिक अपील गर्दछु ।
जन्मदिनको अवसरमा विद्यालयलाई सहयोग 370
पर्वतका ११ लघु जलविद्युत् आयोजना अलपत्र 42
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढ्यो 33
पर्वतका छ पत्रकार सम्मानित 385
नागरिकताका सम्बन्धमा एनआरएनको सरकारलाई ध्यानाकर्षण 23
अस्पतालमा भर्ना भाको छु भनेर बोलाउँछन् - गायक सुदिप क्षेत्री 157
‘शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा सम्झौता गर्दिन’ 289
कालीगण्डकीले विद्यालय बगायो 2356
पर्वत समाज यूकेका अध्यक्ष दधी आचार्य सम्मानित 474
नाग्लिवाङमा कक्षा ११को पढाई शुरु 591
हाम्रो लोकसंगीतलाइ संसारभर चिनाउन छ 1590
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको जीवन - दुई बिहे गर्नु मेरो जिन्दगीको भूल 526
नेपाल टप अञ्जलीको डाक्टर बन्ने सपना 773
‘व्यवसायिक सीप विकास तालिम केन्द्रले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गर्छ’ 1056
चर्चामा आउन संस्था खोलेका होईनौँ 1512
पर्वतको समृद्धिमा देशबिदेशबाट लगानी जुटाउनु पर्छ : केदारनाथ शर्मा 499
तिमिल्सीना भन्छन- इमान्दार भएर काम नगरे जनताले माफ गर्दैनन् 151
जन्मभूमीका लागि सबैले सकेको योगदान गरौँ । 496
जनताले प्रश्न सोध्न नपर्ने गरि काम गर्छु ः गिरी 185
समाजसेवा खुसी साट्ने अवसर हो : कुल आचार्य, एनआरएन उपाध्यक्ष 1017